Ubuntu Kanelina vs. Linux Mint, ilay Kubuntu vaovao vs. KDE neon | Ubunlog
Tamin'ity fahavaratra ity dia nanoratra lahatsoratra iray izahay izay nanazavana ny fitoviana sy fahasamihafana misy eo amin'ny Kubuntu sy ny KDE neon. Iray ihany ve ny rafitra fiasan'izy ireo? Tsia, na dia izy ireo aza novolavolain'izy ireo. Priori, miresaka momba ny rafitra miasa izahay, fa ny filozofia fanavaozana, ankoatry ny zavatra hafa, dia mampiavaka azy ny fampiasana ny iray na ny iray hafa. Amin'io lafiny io dia afaka milaza izany isika fitoviana sy fahasamihafana misy eo amin'ny Ubuntu Cinnamon (Remix) sy Linux Mint izy ireo dia saika kopian'ny karbonin'ny an'ny rafitry ny Community KDE.
Saingy mila mazava tsara momba ny zavatra iray ianao: ny Ubuntu Cinnamon dia tetik'asa fotsiny amin'ny ho avy, iray izay manana bileta maro ho lasa tsiro ofisialy Ubuntu, saingy momba izany dia tsy manana vaovao marim-pototra izahay. Ny zavatra ianarantsika momba ny ho lasa tsiro fahasivy an'ny fianakaviana Canonical azontsika vakiana amin'ny tambajotra sosialy ary alaivo sary an-tsaina hoe hanao ahoana ny zavatra amin'ny ho avy. Misy zavatra sasany izay toa mazava, ary ny iray amin'izy ireo dia ny tian'ny mpamorona ny tsiron'ny "Kanelina" ho antsika ampidiro ny sehatra hanampy, tsy hampihena na mamafa.
Kanelina Ubuntu: Vaovao Canonical vetivety, vaovao momba ny tontolo iainana avy eo
Raha efa niresaka momba ny Kubuntu sy ny KDE neon izahay dia efa inona ny rindrambaiko ahitana tsirairay, inona no aorian'ny fametrahana aotra ary inona ary oviana no havaozina izy ireo. Ampio izahay hahazo hevitra momba ny iray amin'ireo bitsika farany avy amin'ny kaonty Ubuntu Cinnamon ofisialy:
Ratsy! (amin'ny fomba mahery fo mahery)@debian Ny ekipan'ny kanelina dia miandraikitra ny fanomezana Cinnamon an'ireo mpampiasa Debian sy Ubuntu. Linux Mint dia eo mba tsy hiavaka fotsiny ary hanana rindrambaiko manokana fa hiveloman'izy ireo koa kanelina, noho izany ny Linux Mint dia hanana ny farany ary ny Ubuntu ho ao aoriana.
- Ubuntu Cinnamon (@UbuntuCinnamon) Septambra 23, 2019
Ratsy! (miaraka amin'ny feo maherifo). Ny ekipan'ny Cinnamon Debian no miandraikitra ny fandefasana kanelina amin'ireo mpampiasa Debian sy Ubuntu. Tsy eo fotsiny i Linux Mint noho ny maha-manokana azy sy ny fananany rindrambaiko manokana, fa ny fampandrosoana ny Kanelina. Noho izany, Linux Mint no hanana ny farany ary ny Ubuntu dia somary ao aoriana.
Izaho manokana dia mieritreritra fa ny valiny dia mazava sy mampatsiahy ny fifandrafiana tsy misy eo amin'ny Kubuntu sy ny KDE neon:
Ny tontolon'ny sary Kanelina dia novolavolain'ny ekipa Linux Mint, noho izany ny fiasa vaovao rehetra eo amin'ny tontolo «Sinoa» dia hahatratra ny Linux Mint Cinnamon alohan'ny rafitra fikirakirana hafa.
Ny vaovao Canonical dia ho tonga aloha kokoa amin'ny Ubuntu Cinnamon noho ny Linux Mint. Ary, na dia tsy nisy aza ny tiany, Linux Mint dia miorina amin'ny kinova LTS, noho izany, ohatra, raha lasa tsiro ofisialy ny Ubuntu Cinnamon Remix amin'ny Oktobra 2020, hanana tanjona kininina Ubuntu 20.10 GAnimal miaraka amin'ny zava-baovao rehetra isika. Avy amin'ny Canonical, fa Linux Mint dia hijanona miorina amin'ny Ubuntu 20.04 hatramin'ny aprily 2022.
Na inona na inona fahafaliako miaraka amin'i Kubuntu, heveriko fa miatrika vaovao lehibe iray isika, ny fahatongavana singa vaovao amin'ny fianakavian Ubuntu, ka toa tsara raha manaraka ny kaonty Twitter amin'ny tetikasa ary omeo azy ireo ny fitiavana sy fankaherezana mendrika azy ireo, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » Birao hafa » Ny fifandraisana misy eo amin'ny Ubuntu Cinnamon sy Linux Mint dia hitovy amin'ny an'ny Kubuntu sy ny neon KDE
sobaba dia hoy izy:
Tsy ekeko fa rafitra fiasa mitovy izy ireo satria ny fototra dia Ubuntu amin'ny Linux mint, kubuntu, lubuntu, xubuntu, sns. Ny mahasamihafa azy ireo dia ny tontolon'ny sary sy ny fonosany, fa ny fototr'izany dia izy ary efa elaela aho no niaraka tamin'ny hevitra tao an-tsaiko, tokony hanomboka distro Ubuntu ny kanonika na hiantso azy hoe X izay mamela anao hisafidy ny tsiro amin'ny fametrahana sary ary tsia, tsy miresaka mini.iso alternate aho miresaka momba an'i Ubuntu fa tokony hanome fiovana sy hampivondrona ireo tsiro rehetra amin'ny fametrahana Ubuntu mba hisafidianan'ilay mpampiasa farany izay hapetraka.
Mamaly an'i Perroflauta
Fa ny rafitra fiasa no zava-drehetra. Ny fotony no fotony, fa ny zavatra hafa rehetra lazainao dia mahafeno azy, ny tontolo iainana, fonosana, fampiharana sns.
Natolotra ny beta voalohany an'ny VirtualBox 6.1
Ireo no mpandresy tamin'ny fifaninanana sary sokitra Ubuntu 19.10 Eoan Ermine